Maitiro Ekugadzira Ega Eya Emoji
Emoji inonakidza kushandisa kweanoda chero chiitiko, uye nepo paine chichiita senge nhamba isingaperi yekusarudza kubva, kudzidza kugadzira yako yega emoji ndiyo nzira yakanyanya kunaka yekuwana izvo chaizvo zvaunoda. Nekuti ngatizvitarisei, dzimwe nguva panenge pasina emoji yekutaura chaiko pachiso chako.
Paunogadzira yako pachako emoji, iwe unogona kunge iri chero chaunoda: chinhu, mamiriro ekunze, chiratidzo, chimiro chechiso, kana chimwe chinhu zvachose. Iwe unogumira chete nekufungidzira kwako uye kusununguka kwekushandisa kweiyo emoji kugadzira.
Kune akawanda emoji vavaki kunze uko, asi pazasi ndiyo dzidziso yedzakanakisa nzira dzekugadzira yako emoji iyo iwe yaunogona kushandisa pafoni yako, piritsi, kana komputa.
Maitiro Ekugadzira Ega Yem yako Emoji Pane iPhone
emojily ndiyo nzira yakanyanya kunaka yekugadzira yako emoji pane iPhone. Iyo ine kugadzira-kubva-kukwikwidza sarudzo uye isina kujairika nzira yekugadzira emoji nekukurumidza. Izvo zvakanaka nekugadzira emoji yemanzwiro ako.
Paunoshandisa iyo New sarudzo kubva kuApp's home screen, iwe unowana akati wandei zvishandiso zvekugadzira. Kubva kuruboshwe kurudyi, uku ndiko kurongeka kwaunoita yako emoji:
Sarudza template, senge yakavezwa yemavara akawanda, chakaenzana mativi, kana musoro weTaco.
Sarudza pane mamwe maziso.
Flip kuburikidza nemuromo sarudzo kuti utsvage yakakodzera.
Wedzera imwe bvudzi rechiso kana iwe uchida.
Sarudzo sarudza dzimwe ruoko rwemaoko.
Sarudza chimwe chezvinhu kuti ive yako emoji kubuda.
Sarudza ngowani yako emoji.
Yese sarudzo inogona kurongeka, saka unokwanisa kuvakwevera padhuze ne emoji kumashure, uchitenderedza ivo, uye voita saizi uchishandisa zvakajairika minwe yekuita. Tinya bhatani rekuburitsa kana wapedza kuchengetedza yako tsika emoji kune yako gallery.
Buda Emojily uye ugoenda Settings > General > Keyboards > Keyboards > Wedzera New Keyboard > emojily kuwedzera Emojily keyboard pafoni yako uye kuita kutumira yako tsika emoji zviri nyore chaizvo.
Paunenge wagadzirira kushandisa yako yakavakirwa emoji, shandisa iyo dhizaini padyo nekhibhodi kusarudza iyo yakatarisana nemaziso Emojily. Imomo ndimo maunowana emoji yawakagadzira.
Emoji Me Mhuka Dzenzvimbo yakafanana yemahara app ye iPhone uye iPad. iOS 13 uye iPadOS vashandisi vanogona gadzira emoji naMemoji. Animated Memoji inowanikwa chete pa iPhone X uye gare gare, iPad Pro 11-in, uye iPad Pro 12.9-in (3rd gen).
Maitiro Ekugadzira Ega Yem yako Emoji On Android
Kugadzira yako emoji pane Android zviri nyore na Emoji Mugadzi. Kana iwe usingade kushandisa nguva yekugadzira yako, kune zvakare gallery iyo iwe yaunogona kutarisa kuti uwane yakakurumbira emoji yakagadzirwa nevamwe vashandisi.
Chimwe chinhu chakasarudzika pamusoro peiyi emoji gadzira ndechekuti paunenge uchisarudza iyo mativi akasiyana emoji, iwe unowana kuona chekutarisa pakarepo. Izvi zvinokubatsira kusarudza kuti chii chaunotora nekuti haufanirwe kufungidzira kuti chichaita sei kana uchichisarudza.
Heano maitiro Emoji Mugadziri anoshanda pane Android:
pombi Nyowani Emoji kubva pachiso chemba.
Sarudza kumberi kune yako emoji. Iyo inogona kuva chero chinhu kubva kune imbwa kana kutakura kumeso kune moyo, miriwo, katsi, kana denderedzwa. Kune mamwe mamiriro ehupenyu.
Shandisa menyu zvidhori pazasi peapuroni kutora maziso, maziso, muromo, maoko, bvudzi, bvudzi kumeso, mask, nezvimwe.
Tinya chiratidzo chekumusoro kurudyi kuti uchengete tsika emoji kune gallery mukati me app.
Tinya emoji uyezve bhatani rekugovana kuti uigovane kuburikidza nechero ipi yezviitwa zvako.
Bitmoji ndeimwe sarudzo huru yekugadzira emoji pane Android uye iOS. Iyo emoji iwe yaunogadzira muiyo App inowanzo kuve yakaoma kunzwisisa kutarisa mune izvo kune zvinyorwa uye zvizere zvizere, asi zvichiri nyore chaizvo kugadzira.
Zvakafanana ndizvo Chudo, asi yakashambadzirwa zvakanyanya seyambiro yekushandisa uye nehupenyu, yakasimbiswa chaiyo emoji inogara pamusoro pechiso chako chaicho.
Maitiro Ekugadzira Eya Eko Emoji Kubva Komputa
Iyo yemahara yepamhepo emoji maker kune Labeley chinhu chakanakisa pakuvaka chako emoji. Iwe unogona kushandisa iyo yakazara screen ye desktop desktop yako kuti iite emoji yakakura nekutora chimiro, chimiro chemberi, maziso emeso, chimiro chechiso, zvishandiso uye zvinyorwa.
Paunenge wapedza, iwe unogona kugovera emoji pamusoro pe Facebook Pinterest, kana Twitter, kana chengetedza kune komputa yako kuti uite nayo sezvaunoda.
Emoji-gadzira yakafanana asi iri nyore kwazvo kuchengetedza kune komputa yako. Kune zvakawanda zvingasarudzwa zvemhando dzechiso uye zvimwe zvinhu, uye chinyorwa chakavakirwa-mukati chichiita kuti unyore pane emoji.
The piZap emoji mugadziri imwe sarudzo yevashandisi vemakomputa. Dzinoverengeka dzesarudzo dzinodhura, uye yepamusoro-soro kutumira hakusi kwemahara, asi kuchine zvakawanda akasiyana emoji zvekuvaka maturakiti (uye yakajairwa-yemhando yepamusoro kunze ichokwadi yakaringana).
Sezvauri kuona, kune dzakawanda nzira dzekugadzira yako emoji. Unogona kuzviita pakombuta yako, kubva paAditor yako kana iPhone, kana pahwendefa.
Dzimwe dzenzira idzi dziri nani pane dzimwe kana uchida kutumira emoji kuburikidza nekhibhodi yefoni yako, asi dzimwe dzakanakira kutumira email kana Facebooking emoji kubva pakombuta kana kushandisa emoji mune mamwe mapurojekiti.
Hazvina mhosva kuti ndeipi nzira yaunosarudza, kugadzira yako emoji kunonakidza zvisingaite. Kugadzira nyowani nyowani emoji iyo vanhu vazhinji vasiri kushandisa inogona kukuita kuti utarame mumapoka eboka uye inogona kunge iine shamwari dzako kushandisa zvekare emoji.